Oromoon Ajeechaa fi hidhaa xumuura itti goochuuf barna tarkanfi fudhachuu qaba.
Yeroo dhiyoo kana keessatti lubuun Oromoo heedduun biyya Libiya keessatti islamoota ISIS qalamee jira, qalamuufs jira, Yemen keessatti ajjeefama jira, kan lubuun jirus Yemen kessatti beellaan dhumma jira. Saudi Arabiya, Afrika Kibbaa keessatti kara irratti ajjeefama jira, Sudan, Egypt Sanai keessatti ongeen dhumaa jira. Galana Mederterania fi India keessatti Qurxumituu nyacha jira. Biyya keessatti Oromoo kuma 50,000 ol maqaa ABOn yakkamee mana hidha jira. Mootumman abba irre wayyannen muca da'ima waggan isa 11 ta'e wajjira polisi magaala galammso keessatti ati ABO dhaf basaasta haati kee eessa jirti mal hojjetti jedhani utuu reebani lubbuun isa darbite. Ilman oromoo irratti gochi gara jabumma irratti rawwacha jiru itti fufee jira. Waan nama dhibu Oromoon atamin obsee Habasha waliin nyatee waliin dhugaa ? utuu ijoole isaa akkasitti jala ajjeesani maliif sodataa Oromoon?
Diini Oromoo ajjeese, hidhee biyya ari’atee ilee biyyya Oormatii Oromoo hordoofe dorsisu, Oromoota gara jalatan maallaqaan bitee namoota haqa Oromoof falmatan irratti bobasa jira. warii biyya keessa ilee rakkatanti warii biyya ala ta'ani Embassy Habasha jala adeemani Oromoo basasan samuu atamii qabu lata, lafa dhiyooti Oromoon wal calaaluu qaba. Oromoo kara inni rakko isaa ilee odeefannoo waliif dabarsuu media hunda jala ukamsuuf irratti hojeecha jiru.Websitin Gummii Paarlamaa Oromoo Lukeewan wayyane namoota ta'aanin torban tokko gutuu ugurame ture. Namoota kana qindesan fi namoota ugura kana raawwacha jiran irratti hordoofin itti goodhma jira. Gummin Paarlamaa Oromoo ji'a 2 kessatti yeroo 3ffaaf uguramun isaa ni yaadatama. Maliif akka nu uguranf enyuu akka ugura kana raawwata jiru waan beeknuuf waan gadiinu hin qabnu. Sababiin isaa diini yaakka isaa hubate waan dhiiphacha jiruf kana goodha.
Ajjeechaa, Hidha fi murteen du’aan adabamun oromoo erga Asili Oromoo faa irrati eglee dhabatee hin beeku. Addee Aberash Yadeta waggoota 12 mana hidhati darbatamte qoofa ishee mana dukana kessati dhukubsata jirti. Adde Aberash Yadeta Hanga harka diinati kuftuti dubarti murnnoo fi onnee cimma qabdu, dubarti dhiira caalaa diina dura batee waan dandeesu hunda gochuu irra of hin qusane dha. Adde Aberash sochii qabsoo goodhamuu hunda irratti kan guyyaa tokko bira hin hafne, Tessoon Oromiyaa Finfinneeti hanbisuu irratti, dula Macaa fi Tulamaa yeroo baaye gaggefame irratti dura dhaabbachuu irratti, Baratoota University Wayyanen yeroo adda addaa dararaman, birra dhabachuu fi gargarun, samicha waqeefana irraatti gaggefame falmachuu fi wagga waggan Irrechaa Hora Arsadi miidhagsun bakka hundatti Oromoo dura jirti, Oromootaa ABOti yakkaman hidhaman torban torbanin mana hidhati gafachuun dirqama Oromummaa batee jirti. Waan nama gadisisuu namooni akkasi harka diinati yeroo kufan Mana hidha keessatti dagatamuu fi maatin isaan dagatame abba dhabuun keesumati dubartiin ijoole ishe facafte hidhati iranfatamun qabsoo keenya lafisa. Kanaafuu Oromoon hidhamtoota fi maatii isaan gaafachuu qabna. Qabsa'oon Oromoo mana hidha jiran hunda Oromoof waan qabsa'anf qabeenya fi goota Oromoo hundati, kanaafuu hundi keenya gargaruu qabna. Dubartoon Oromoo Qabsoo Bilisumma Oromoo kessatti seena adda qabu, hidhannoo isaan utuu hin hikatiin qawee diinati utuu hin latiin , icciti Oromoo utuu diinati hin dabarsin wara qabsa'an dha isaan keessa tokko Adde Abersha yadetati. Aberash Yadeta ABOti yaakamte waggoota 12 hidha cimma fi bakka nama hin argineti dhukubsatee du'uu hin qabdu. Oromoon waan dadana'uu hundan garggaree lubu ishee hambifachuu qaba.
Obbo Baqala Garba fi Obbo Olbana Lelisa ykka tokko malee hidhaman. Oromoon siyyaasaa qoofan hidhaman 50, 000 ol ta’uun isaan gabafamee jira.
Bara ji’aa Ebla, 2014, lubuu Oromoo 79 , bayinan dargaggoota fi baratoota kan ajjeese wayyanen ammas ajjeecha kana itti fufuun isaa tufi saba kanaaf qabu argisisa. Kanuman sabboontota Oromoo FDG uummata waliin qabsiisu jedhamuun yakka tokko kan irratti hin mul’anne namoota nagaa 50 ol ta’an Aanaa Jimmaa Horroo keessaa qabee mana hidhaatti guure namoota muraasa maqaa isaanii nuu gabaasame kessaa akka armaan gadiiti. Qellem Wallagaa Aanaa Jimmaa Horroo irratti uummata nagaa qonnaan bulaa fi barattoota mootummaa Wayyaanee dura dhaabbatan kan jedhuun Caamsaa 5, 2015 irraa kaasee Oromooni mana hidhaatti funaanamaa jiru. Isaan keessa
1. Shuumataa Danuu-Qonnaan Bulaa
2. Abdiisaa Indaaluu-Ogeessa Fayyaa
3. Masarallaa Dinbaashaa-Hojjetaa Mootummaa
4. Charinat Tamasgeen-Daldalaa
5. Geetuu Tamasgeen-Daldalaa
6. Tigistuu Tamasgeen Daldalaa — namootni kun sadan obboloota.
7. Caalii Ganjoosaa-Barataa
8. Kariim Abdulkariim-Qonnaan Bulaa
9. Effawuu Abdulkarim-Qonnan Bulaa
10. Taaddalee Tasfaa-Qonnaan Bulaa
11. Nabiyyuu Tashoomee-Qonnaan Bulaa
12. Wangeeluu Bajoosaa-Barataa
13. Mallasaa Alamuu-Qonnaan Bulaa-Abbaa Maatiiti
14. Geetuu Tasfaayee-Barataa
15. Solomoon Gurichoo-Konkolaachisaa
16. Lataa Wiirtuu-Daldalaa-deggeraa fi miseensa WBO jechudhaan akkasuma mana isaa keessa meeshaa lolaatu argame jechuudhaan tika mootummaan qabame,
17. Bulchaa Qalbeessaa-Konkolaachisaa
18. Abdii Aseffaa-Barataa
19. Saamsoon Solomoon-Barataa
20. Phaawoloos Atoomsaa-Hojjetaa Mootummaa-kanaan dura irra deddebiidhaan uummata ijaarte, miseensa ABOti jedhanii hiraarsaa turan,
21. Gammachuu Bantii-Barataa
22. Ishete Zakkaariyaas-Barataa
23. Naggaa Balaachoo-Barataa
24. Dirribaa Oljirra-Qonnaan Bulaa
25. Fedhesaa Bashanaa-Qonnaan Bulaa
26. Yoohannis Qixxeessaa-Qonnaan Bulaa
27. Yaadasaa Danuu-Hojjetaa Mootummaa-kanaan duras mana hidhaa Wayyaaneetti hiraarfamaa ture,
28. Abdulkarim Jamal-mana jireenya isaa keessa sakatta’uudhaan meeshaa ABOtu argame, jechuudhaan qabame. Namoon maqaan isaan kana olitti caqasaman kuni yakkaa tokolee kan hin rawwatne yeroo ta’u wayyanneen yakka soba fi maqa xuresidhaan oromoo waan ta’an qoofaf dararaa jirti.
Baratoon Oromoo fi dargaggoon Oromoo nannoo Ambo irra mana hidhati guraman dararama kan egalamee ammas itti fufun Ebla 20, 2015 baratoota 50 ol university fi mana barumsa sadarka lamaffaa irra qaban hidhan jiru. Baratoota 20 ol ammoo reebicha haman garmalee madeessan jiru. Wara hidhaman keessa:-
1. Magarsa Mashsha Ayyana M Student /Ambo University, health professional
2. Urgessa Danana M Student, Rift Valley College
3. Birehanu Diriba M Teacher, Rift Valley College
4. Getachew Gadaa Dereje M Student, Jimma University
5. Tarku Debisa M
6. Abdata Olansa M HRLHA is a non-political organization (with the UN Economic and Social Council – (ECOSOC) Consultative Status) which attempts to challenge abuses of human rights of the people of various nations and nationalities in the Horn of Africa.
7. Marara Tujuba M
9. Argamsisa Lenjisa M Student, Ambo University 4th year Engineering
10. Obsa Abdissa M Student, Liban Mecha school 9th grade
11. Homa Hundassa M
12. Kumsa Bayisa M Student, Liban Mecha school 9th grade
13. Tadesse Sime M Student, Liban Mecha School 9th grade
14. Daran Demisse M Businessman Kebele 02, Ambo
15. Amsalu Midhaqsa M
16. Solomon Abebe M Student, 10th grade
17. Gamachu Siyum M
18. Sisay Lamessa M
19. Misgana Chemeda M
20. Geleta Chaluma M
21. Chimidessa Mutasa M
Wara reebichi haman irra ga’ee hospitala olana Ambo seenan keessa :-
3 Badhassa Gurmu
5 Fayera bekele M Student, 9th grade Reebichi, hidha fi barumsa irra uguramuu kun kan mootumman geggefama jira Fillaanno Caamsaa 24, bara 2015 dhufu irratti moormitoota filaatuu jeedhaman wara shakman hunda irratti rawwacha jirachuu isaa gabasni Oromiyya irra nu ga’aa jiru ibsee jira.
Oromoon biyya baqatee Bishan keessatti dhumuu irraa, Musilima Arabootan qalamuu irraa, biyya Araba fi biyya Afrika Kibba keessatti salphatee du’uu irraa kara danda’ee hundan qabsa’ee TPLF buqisee abba biyya ta’uu banan ajjeechaa fi hidhamun, boo’iichii fi gadaduuman irra hin dhabatu kanaafuu :-
1. Oromoon Oromoo tatani dhalataan hundi OFC qoofa filachuu qabdu, waan TPLF waliin hidhata qabu hin filatiina, Oromoo Bilisumma dhabun isaa du'aa waliin wal hin caaluu Bilisummaa filachu qabdu. Dhaamsii keenya: Oromoon raakates, beela'ees, dheebootes yeroo hunda waan bilisuma Oromoo mirkaneesuu irrati hojjeechuu qaba. Dhiigii Oromoo wagga waggan kan dhnagala'aa jiruuf, bartoon Oromoo akka warabessa kan ajjeefamanf waan bilisumma hin qabneef kanaafuu Bilisumma filadhuu, mootumman yoo humnan sagalee kee fudhachuu yaale fincila isaa dhumaa kan walii irra hin cinne geggesuun Bilisummaa Oromoo labsachuu qabna.
2. Oromoon diina isaa ajjeesuuf mana isaa dhufee ajjeesun mirga isaati. Kana booda Oromoon lafa isaa irratti, mirga isaa irratti, qe'ee isaa irratti, qabeenya isaa irratti lamii isaa keessatti diini yoo isaa ajjeese galee badin kan Oromooti malee kan diina miti. Qeerroon Oromoo laga isaa keessati loluu dhisee Galana Medrterania fi India keesatti fi Musilimoota ISIS jeedhamanin qalamuun dhabatee diina qabeenya Oromoo quufee bookisuu akka Abbayi Tsheayee faa kana irraa qabeenya isaa deefachuu qaba Oromoon Harka Araba keessatti dhumu irraa ykn Bishanti naqamee dhumu irraa wari dargaggoo wal gurmeesitan warraana ABOti dabalamuun Oromiyyaa keessatti diina lolee Oromiyya Bilisoomsuu qaba.
Kana malee furmatii hin jiru. Kara kara baqanee kara kara facanee jijjiramii dhufuu hin jiru.